PlayOnLinux: ine itsva Alpha Kuburitswa nenhau | Linux Vakapindwa muropa
PlayOnLinux: ine itsva Alpha Kuburitswa nenhau
waini chirongwa chakakura chine chinangwa chekuunza chizvarwa cheMicrosoft Windows software kuUnix mapuratifomu, uye sezvamunoziva, shamwari yakanaka yeWine chirongwa chePlayOnLinux, software ine mamwe magwaro ekumisikidza Waini nenzira ine otomatiki kuti software iwe unoda kuisa inoshanda nemazvo, pamusoro pekupa iri nyore graphical interface yekumisikidza uye manejimendi ye software yako.
Kana iwe uchida unogona kuedza iyi vhezheni itsva izvozvikunyangwe zvingave zvichiri kusagadzikana kana kukonzera matambudziko. Muchokwadi, zvinoita sekunge kwatove nevanoverengeka vashandisi avo ivo vane matambudziko paunenge uchiisa iyi package pane yako distros. Dambudziko ravanowana nderekuti PlayOnLinus haishande pamwe neshanduro dzichangoburwa dzeJava, saka kana uine shanduro dzazvino hazvishande. Zvinotaridza kuti vagadziri vari kushanda kugadzirisa izvi nekukurumidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » PlayOnLinux: ine itsva Alpha Kuburitswa nenhau
Seafile gore faira rekutambira chikuva